Izindlu Ezithengiswayo | May 2022
Iingcebiso Zokuzonwabisa Ezivela Kumagunya Kalulu
Yenza Iphupha Lakho Iphupha Libe Yinyani
Ngubani ophethe inqaba yaseCottonland eWaco, eTexas?
Iinkwenkwezi ze'Fixer Upper 'uJoanna kunye noChip Gaines bathenga iCottonland castle eyimbali ngo-3300 eAustin Avenue ngo-2019. Ngoku benza izicwangciso zokuhlaziya.
UDrew noJonathan Scott Bachitha nje i-9.5 yezigidi zeedola kwikhaya laseLos Angeles
UDrew noJonathan Scott we-HGTV kutshanje bathenga le mali ye-9.5 yezigidi ze-1930 indawo yaseColcord eLos Angeles yathathwa 'njengepropathi yendlu.'
Amakhaya kaWill Smith noJada Pinkett Smith: Zonke izindlu ababenazo ndawonye eCarlifonia, eHawaii nasePennsylvania
Ngaphezulu kwekhosi kaWill Smith noJada Pinkett Smith's ubudlelwane beminyaka engama-26, baye bafeza okuninzi kakhulu. Nokuba kuyabanjwa, kuyaculwa, kudlwengulwa, kuveliswa, nayo yonke into ephakathi, abakwaSmith banokwenza nantoni na ebonakala ngathi yeyokubandakanya ukutyala imali kwiipropathi ezinomtsalane kwihlabathi liphela. Ngokufana nesibini esine-hyphenate ngokwabo, ipotifoliyo yokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba inoluhlu, kubandakanya indlu enkulu yeCalabasas-kunye ne-2.5 yezigidi zeemoto (ewe, ngenene!). Apha ngezantsi, jonga zonke iipropathi ezisibhozo ezithe zathiwa nguMnu noNkskz. Smith kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo.
Eli Khaya Livela 'Kumathambo Alungileyo' Vela nje kwiNtengiso ye $ 305,000
UMina Starsiak Hawk weHGTV kunye noKaren E Laine bayilungisile le nto ngoku ukuze ithengise ikhaya lase-Indianapolis kwisiqendu esithi 'Amathambo alungileyo. Nantsi indlela ebonakala ngayo ngaphakathi.
Amakhaya kaJustin kunye noHailey Bieber: Zonke izindlu ababenazo bobabini, eCarlifonia naseCanada
Nangona beneminyaka emibini enesiqingatha betshatile, uJustin noHailey Bieber sele befumene ipotifoliyo yokuthengisa izindlu nomhlaba, kubandakanya iipropathi ezine (zombini irente kunye nokuthengwa) ezixabisa ngaphezulu kweedola ezingama-40 zezigidi- iindawo ezimbini zokuhlala eBeverly Hills, enye e-Ontario, kunye neendawo zokuhlala ezithobekileyo eToluca Lake. Apha ngezantsi, jonga zonke iindawo zokuhlala uMnu noNkoskz Bieber abazibizele ekhaya ukusukela oko batshata ngo-2018.
Izitayile ezili-15 ezahlukileyo zeZindlu eziFunyenwe eMelika
Chonga indlela eyakhiwe ngayo indlu yakho usebenzisa izinto eziphambili kunye nezibakala. Iifestile, uphahla kunye nezinto ezibonakalayo zinokuveza okuninzi malunga noyilo.
Indlu yeFixer Upper 'yaseAsia Ranch' eWaco ngoku ikwiNtengiso
'I-Ranch yaseAsia' yajika iFrench Country Countryhouse yasekhaya ukusuka kwixesha lesibini leFixer Upper yafika nje kwintengiso-kwaye ixabiso elicelwayo liphindwe kathathu kunaleyo yaya ekhaya kumdlalo weHGTV. Iyaqondakala intle, ngokusekwe kubuhlanya bangaphandle kunye notshintsho lwangaphakathi ekhaya eliye labulela ngenxa yeChip noJoanna Gaines emva ngo-2015.
Iinyani ezi-11 ezimangalisayo malunga neNdlu yeBrady Bunch-UkuTyhilwa kweBrady kakhulu kutyhilwa
Jonga ngaphakathi kweNdlu yeBrady Bunch, esandula ukuthengisa kwi-HGTV nge- $ 3.5 yezigidi, kwaye ufunde ezinye zezona nyani zicocekileyo malunga nekhaya elidumileyo leTV.
UKim Kardashian kunye neNdlu yoKwakha yeNdlu yaseKhan West iyathengiswa kwakhona, ngeefoto ongazange wazibona
UKim Kardashian kunye nendlu yangaphambili ye-Kanye West eBel Air, eCalifornia ibuyile kwintengiso emva kweenyanga ezisixhenxe kubunini bezigidigidi zaseUkraine uMarina Acton. Bacela i-18 yezigidi zeedola.
I-Shaq's Orlando Mega-Mansion ibuyela kwiNtengiso
Inkwenkwezi ye-NBA uShaquille O'Neal weOrlando, indlu yaseFlorida ufumene ixabiso elisikiweyo kunye nokuhlaziywa. Jonga utshintsho apha.
Iindawo zokuhlala zodidi ezithengiswayo-Iindawo zokuhlala eziThengisayo
Ukujikeleza kwezindlu ezimbalwa zokunethezeka umntu anokuzithenga ngaphantsi kwe-300k.
Nantsi indlela 'iNdlu yeBrady Bunch' ejonge ngayo emva koHlaziyo oluKhulu kakhulu '
'Ukulungiswa kweBrady kakhulu' kuphele ngokusesikweni kwaye ngekhe kwenzeke ngaphandle koncedo lwabantwana abathandathu 'bakaBrady Bunch'. Jonga imifanekiso esemva kwekhaya leSixeko seStudiyo kwaye ufunde ukuba wonke umntu ubenegalelo njani.
Ikhaya laseFrank Sinatra elihle leNkqantosi yasePalm alinakufumana umthengi emva kweminyaka engama-14
Indawo kaFrank Sinatra 'Villa Maggio' ebekwe ePalm Desert, eCarlifonia ngoku iyathengiswa. Jonga ngaphakathi ekubhekiswe kuye njengo 'Mnu. Imfihlo kaSinatra yokufihla. '
Izindlu ezingama-50 ezincinci zokurenta-iindawo ezincinci zokuqeshisa izindlu kuwo onke amazwe
Senze uluhlu lwezindlu ezincinci ezifumanekayo zokurenta kuwo onke amazwe
UJustin noHailey Bieber bathenga i-26 yezigidi zeedola eBeverly Hills
UJustin noHailey Bieber bathenga elinye ikhaya kwi-90210 nge-25.8 yezigidi zeedola malunga neenyanga ezili-18 emva kokuthenga i-8.5 yezigidi zasekhaya.
Indlu yokulala engama-46 eTexas-Indlu enkulu yaseTexas iyathengiswa
Ikhaya lezitena elingama-60,175-leenyawo likwanendawo zokuhlambela ezingama-26 kunye negaraji yemoto esithoba, kwaye iza nedama lokubhukuda, i-spa yangaphakathi, ikheshi, kunye ne-acre ye-15, ebonisa ukuba yonke into inkulu eTexas.
I-Fixer Upper's 'Paw Paw's House' ikwiNtengiso- 'Izindlu eziLungisiweyo eziPhezulu' ezithengiswayo
Emva kokudweliswa ngoJanuwari 2019, 'iPaw Paw's House isekhona kwintengiso ye-1,450,000 yeedola. I-Chip kunye noJo banike igumbi lokulala e-3, igumbi lokuhlambela i-3 kwikhaya lase Mzantsi-ntshona, elipholile.
Ikhaya likaBeyonce loBuntwana liyathengiswa
Ikhaya laseHouston apho akhulela khona uBeyoncé ngoku liyathengiswa. Jonga ngaphakathi kwikhaya langaphambili lika-Queen B.
Iindleko zokuthenga indlu-iNdlu yokuVala iindleko, iiNtlawulo eziPhantsi, kunye nokunye
Phambi kokuba wenze nesithembiso, kuyakufuneka uhlengahlengise ukuba kuyakubiza malini ukuthenga ikhaya — ngaphaya kwexabiso lesitikha.
Omnye wabafazi 'bePainted Ladies' baseSan Francisco ubethe intengiso nge $ 2.75 yezigidi
Ngoku, enye yeempawu eziphambili zeSan Francisco 'zePainted Ladies,' ithengisa nge-275,000,000 yeedola. Ime kwi-714 Steiner Street, ngaphesheya kweAlamo Square Park.
Izityalo zangaphakathi ezithanda umthunzi
izindlu ezincinci kwiitreyila
Esona sityalo sangaphakathi sisesikhanyiso esiphantsi
imibala yegumbi lokutyela 2017
izimvo zokugcina izinto zokudlala zabantwana